Makuva emhuka, hunyanzvi hwaStephen King. | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Type, Novela, Zvinotyisa
Stephen King's Makuva Emhuka, hunyanzvi kubva muiyo bhaisikopo idzva rakavakirwa pabhuku.
Makuva Mhuka (Pet Sematary, muChirungu) iri bhuku rakaburitswa muna 1983 rakanyorwa na tenzi mukuru wekutyisa Stephen King. Sekureva kwemunyori, anova mumwe weakanyanya kunaka pamhando iyi, iri bhuku rake rinotyisa kwazvo, sezvo iine mamirire echokwadi anopa chitarisiko chakavimbika uye chakajeka.
Iri bhuku rinokwanisa kufambisa iyo yakasviba manzwiro emuverengi, nekuti inonyanya kubata nekutya kufa uye izvo munhu anokwanisa kuita kuchengetedza vanhu vaanoda vari vapenyu, kunyangwe mhedzisiro yacho. Kunyangwe idzo dzakaipisisa dzakakodzera, sekureva kweprotagonist, uyo anotanga chiitiko chakazara nehutsinye kudzorera izvo hupenyu zvaakatorerwa kubva kwaari.
2 Vanonyanya kutaurwa
Ichi chinoshamisa chinotyisa chakagadzwa mutaundi reLudlow, Maine, uko Louis Creed - protagonist--, mudzimai wake Rachel, vana vavo Eileen naGage, pamwe nekatsi yavo, Winston Curchill, vanosvika vachitarisira kuwana imba yemhuri nyowani. Iyo yekupedzisira inzvimbo yakanaka yekoloni kubva paHighway 15 yakakomberedzwa nekubwinya kwesango. Nekudaro, pamusoro pemiti gobvu pane guva rekare remhuka iro rinotanga kugadzikisa zvitendero.
Gare gare mhuri ichaona kuti kune chimwe chinhu chiri kure, kwakadzika musango., zvavanofanira kutya: kumakuva ekare evaAmerindia anounza vanhu kubva kuvakafa. Saiti ino inoshandura zvisikwa zvakavigwa imomo kuita zvisikwa zvakaora, izvo zvisina kufa izvo zvinosiya cheni yezvinotyisa pavanopfuura nenyika yevapenyu.
Louis Creed: musoro wemhuri, uye musoro mutsva wemishonga kuLudlow University. Pakutanga kwechirongwa iye murume wesainzi, akatendeseka uye akadzikama, akatsunga kuchengeta nhengo yemhuri yake uye nekuvapa chengetedzo iyo yaanonzwa kuti vanoda. Asi kana zviitiko zvinotyisa zvikaitika, anokwanisa kuita zvine njodzi zvakanyanya uye zvekunyepedzera zviito.
Rachel Creek: amai vechidiki vekuAmerican, vane chakavanzika chinokanganisa icho chakaratidza umwana hwavo zvachose uye akasiya maari kusingaperi kusakwanisa kubvuma kurasikirwa kwepfungwa, kuchikonzera kutya kugara kwekufa.
Eileen Creek: Makore mashanu ekuberekwa, ndiye mwanasikana wedangwe weChechi. Iye anonzwisisa uye anonzwisisa kwazvo, achigona kunzwisisa manzwiro akaomesesa evakuru kazhinji.
gage: Ndiye wekupedzisira mwanakomana weChitendero, aine makore maviri chete. Gage akanaka uye anowanzoita kuti Louis afunge kuti anozove ane chipo jaya, nekuda kwehungwaru hwake hwepakutanga.
Judson Crandall: Jud muvakidzani akwegura uyo Zvitendero, anova shamwari dzepedyo naLouis, uye wekupedzisira anouya kuzomutora sababa baba. Uyu murume wevanhu ndiye anopa Louis ruzivo rwakakosha kuti abudise zviitiko zvakajairika zvinorondedzerwa muchirongwa.
Iri bhuku rakakamurwa kuita zviito zvitatu, chekutanga chiri chakarebesa. Mariri munyori anotarisa kutsanangura vanonyanya kutaurwa uye mamiriro ezvinhu ayo mumwe nemumwe anobata nawo. Izvo zviitiko uye maitiro ndezvepanyika zvisinei nechakavanzika chisingataurwe uye zvinokwanisika kuziva nehunhu hwese uye nekunzwira tsitsi navo.
Chiito chechipiri kumuka kwezvakavanzika, uko muverengi anogona kuwana kutya kweumwe neumwe wevatambi uye nei izvi zvinotsanangurwa nenzira yehunyanzvi iyo dzimwe nguva inofamba, izere nesimba, uye kune vamwe inogona kukurira uye kutadza. Nzira iyo mhuri uye hutsanana hwevatambi vanowira pasi kubva pachiito ichi ndeyekukufungidzira.
Stephen King akatorwa.
Asi chiri muchiito chechitatu apo muverengi anogona kusangana nekutyisa kwakasviba. Pano ndipo apo, mune ingangoita yehunyanzvi nzira, munyori anoshandura mavara, achiratidza mativi avo akashata. Sezvauchazoona, iyo novel ndiyo imwe yeakanakisa emhando, kwete pasina iri basa nderimwe remakanakisa aStephen King.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Stephen King Mhuka Yemakuva